Pollfish: Sida Loogu Gaarsiiyo Sahaminta Shabakadaha Caalamiga Ah Si Wax Ku ool Ah Moobaylka | Martech Zone
Waxaad abuurtay sahan cilmi baaris suuq ku habboon. Hadda, sidee baad u qaybin doontaa sahankaaga oo aad ku heli doontaa tiro jawaab ah oo tirakoob ahaan si dhakhso leh leh?
10% ka mid ah $ 18.9 bilyan oo cilmi baaris suuqa adduunka ah waxaa lagu kharash gareeyay sahannada internetka ee Mareykanka
Waad kahadashay waqtigan in kabadan intaad kuqortay mashiinka kafeega. Waxaad abuurtay su'aalaha sahaminta, waxaad abuurtay jawaab kasta oo isku dhafan – xitaa waxaad kaamilisay sida su'aalaha u kala horeeyaan. Kadib waxaad dib u eegis ku sameysay sahanka, oo waxaad bedeshay sahanka. Kadib waxaad la wadaagtay xog uruurinta qof kale si dib loogu eego, lagana yaabo inaad markale bedesho.
Marka hadda, waa hagaagsan tahay. Waa inaad kaheshaa sirdoonka saxda ah ee macaamiisha aad rabto, dadka aad rabto inaad gaarto. Kaliya hal dhibaato – sidee baad ugu qaybisaa sahankaaga si aad uhesho dadka saxda ah?
Waxaad isku dayi kartaa inaad ku qaybiso sahamintaada mid uun ama isku darka hababka soo socda:
Sahaminta telefoonka. Laakiin dad aad u tiro yar ayaa dhab ahaan ka jawaaba wicitaannada lambar aan la aqoon, waxaa yaraanaya waxtarka habkan da'da dijitaalka ah.
Wareysiyo shaqsiyeed. Kuwani waqti ayey qaadanayaan, laakiin waxay noqon karaan kuwo waxtar leh. Waxaad ka heli kartaa jawaabo qoto dheer oo aad cabiri kartaa falcelinta iyo luqadda jirka, laakiin tani waxay xaddideysaa soo-gaadhistaada dhagaystayaal ballaadhan, habkani wuxuu ku xidhan yahay eexda wareysiga.
Codbixinta warbaahinta bulshada shaqeyn kara, laakiin ma weydiin kartid su'aalo badan, waxaadna u badan tahay inaad ku kooban tahay dhagaystayaasha dadka aad xiriirka la leedahay.
Xayeysiiska Raadinta Google. Xaqiiqdii waad ku xayeysiin kartaa sahamintaada AdWords, laakiin tani way qaali noqon kartaa, maadaama aysan jirin wax damaanad ah in dadka gujiya xayeysiinta ay dhammayn doonaan sahanka. Sidoo kale waa inaad runti ku fiicnaataa qorista nuqul si dadku ugu riixaan xayeysiiska, waxaadna u baahan tahay inaad ka badiso qof kasta oo kale ereyada muhiimka ah ee la midka ah.
Meelaha sahaminta ka jira khadka tooska ah ee dadka ku gaadha iimayl ama websaydh dhinac saddexaad ah. Tusaale ahaan, kan la sii daayay Sahannada Google 360 - ku darista weyn ee suugaanta Google Analytics-waxay awood u leedahay inay gaarto barkad dhan 10 milyan oo jawaabeyaal khadka tooska ah ah. Si kastaba ha noqotee, qalabkan waxaa dhajiyay dhagaystayaasha yar yar ee awood u leh inay gaaraan (aragti ahaan, taasi waa kaliya 3% dadweynaha Mareykanka).
Waxaad ogaan doontaa in moobiilka aan lagu xusin dhammaan liiska kore. Mobaylku waa dhul aan sharciyeysneyn oo warshado dhowr ah leh, cilmi baarista suuquna, gaar ahaan, waxay ka gaabinaysay inay wax ka bedesho habkeeda — sababo kala duwan awgood. Ganacsiyada iyo suuqleyda dhijitaalka ah waxay hadda bilaabayaan inay fahmaan safarka macaamiisha ee moobiilka, iyo sida ay ugu isticmaali karaan warkan cusub si ay ula falgalaan aasaas aad u dhow 24/7.
Adoo adeegsanaya awoodda moobiilka, jiilka soo socda ee aaladaha sahamintu waxay si caqli badan u qabsan karaan oo bartilmaameedsan karaan qeybaha muhiimka ah ee macaamiisha, taas oo u oggolaanaysa ganacsiyada inay si wanaagsan u qoondeeyaan miisaaniyadooda isla markaana ay u soo saaraan natiijooyinka ay ugu baahan yihiin inay si wanaagsan ugu adeegaan macaamiishooda.
Ku qor Kalluunka - Mashruuc horudhac u ah sahaminta oo si qoto dheer u bixisa sahannada internetka ee xawaaraha hillaaca iyada oo loo marayo barnaamijyada moobiilka ee heer caalami ah. Adoo adeegsanaya Pollfish, waxaad ku geyn kartaa sahanno cilmi baaris suuq ah oo dadka gaadha halka ay waqtigooda ku qaataan ugu badan - ee mobilada.
Pollfish waxay qaadaysaa qaab yar oo ka duwan sidii loo gaari lahaa jawaabeyaasha sahanka, maadaama ay qiimeynayso khibrada isticmaale oo ay rabto inay siiso cilmi baareyaasha suuqyada tayada ugu sareysa ee macaamiisha.
Waa tan waxa Pollfishku u sameeyo si ka duwan
Ma qorto ama lacag siiso guddiga
Ma dhiirrigeliso sahannada iyada oo loo marayo wadiiqooyinka lacagta lagu bixiyo sida warbaahinta bulshada, Xayeysiiska Google, ama kuwa ku xiran
Dadku kuma qasbayo inay ka jawaabaan sahan si loo furo waxyaabaha ugu sarreeya
Ma bixiso jawaabeyaasha sahankiiba, ama gudbin kasta
Waxaa laga yaabaa in sida ugu xiisaha badan, shabakada sahanka Pollfish ay marin u hesho in ka badan 320 milyan oo isticmaale taleefanka gacanta adduunka oo dhan-waqtiga dhabta ah. Marka sidee buu Pollfish ugu heli karaa shabakadda sahaminta ugu weyn adduunka?
Barxadku wuxuu u suurta geliyaa soo-saaraha barnaamijka inuu dhiirrigeliyo jawaab-bixiye kaqaybqaadashada laba dariiqo midkood:
Daabacayaashu way awoodaan cayaaro iyo bixiso abaalmarinta gudaha-app kaqeybqaadasho
Jawaab bixiyaasha waxaa lagu booriyay inay ka jawaabaan ra'yiururinta waxayna galayaan a sawir random
Adoo adeegsanaya qaabkan, Pollfish waxay ku guuleysatay celcelis ahaan heerka dhameystirka sahanka ee 90% - aad uga sarreeya celceliska warshadaha:
Pollfishku wuxuu helayaa jawaabeyaal fiican—Waxay ku hawlan yihiin barnaamijka oo waxay leeyihiin heer jawaab celin sare ah maadaama aysan ku mashquulin saamaynta kale ee dibedda. Intaas waxaa sii dheer, iyagu ma xiiseeyaan inay ku afuufaan sahanka lacag-bixinta sababo dhiirigelin qaldan awgeed. Haddii mawduuca uusan rafcaan ka qaadanayn, way iska fududeeyaan oo way ku noqdaan barnaamijkooda.
Kalluunka Pollfishku wuxuu helaa waqtiyo jawaab celin dhakhso leh (sidee buu 750 u dhammeystirey 10 su'aalood oo sahamin ah saacad saacad ah?)
Pollfish waxay bixisaa waayo-aragnimo jawaab-celin oo kafiican, Maaddaama jawaab-bixiyeyaashu ay daraasad ku qaadan karaan sida ay ugu habboon yihiin, app-ka, markay dareemaan sida, sahan loogu talagalay aaladaha moobaylka.
Marka, waxaa jira siyaabo fara badan oo loo qaybiyo sahankaaga, laakiin mid uun ayaa ka heli kara inaad marin u hesho in ka badan 320 milyan oo si aan kala sooc lahayn ah, isticmaaleyaal aan la aqoon oo ku siin doona xog fiican iyo aragtiyo ku saabsan mawduucaaga sahan.
Baadhitaan farxad leh!
Tags: ciyaarahacayaarosahan caalami ahsahan wareegadoorashadaabaalmarinta codbixintakalluumeysicodbixintaabaalgudyosahanshabakada sahankaabaalmarinta sahankasahan
May 13, 2017 at 9: 02 AM
Haa waad saxantahay Sahaminta moobiilku waxay soo qaban doontaa macluumaad ka badan qaababka soo jireenka ah waxayna si toos ah u beegsan doontaa macaamiisha saxda ah. Sida ereyadeeda oo kale, u hel jawaabaha qaab cusub oo casriyeysan.
Mar 31, 2020 at 3: 57 AM
Xaqiiqdii waan kugu raacsanahay, Xayeysiiska Raadinta Google, Sahanada Taleefoonka, wareysiyada qofka-dhexdiisa ah, websaydhka dhinac saddexaad iyo codbixinta baraha bulshada ayaa dhamaantood ah geedi socod sahan laakiin nidaamkani waa qaali ama waqti badan. sahanka moobiilku wuxuu bartilmaameedsan doonaa macaamiisha saxda ah iyo dhagaystayaasha